Sunshine Land: Halkee Dagaalku Dhab Ahaan Ciyaar (South Korea) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ciyaarta Badbaadinta Sunshine Land. (Sawir: Magaalada Nonsan)
(Waxaa daabacay: Kuuriya Soo Bandhig. Diisambar 27, 2017)
Xarumaha waayo-aragnimada milatariga ee cusub, sida Sunshine Land, halkaas oo dalxiis, ciyaar, iyo khibrad milatari la isku haysto, dhaqdhaqaaqayaashu waxay la dagaallamaan dagaal aad u sareeya halganka ay ku wajahan yihiin waxbarashada ku saleysan nabadda.
Subaxnimadii Isniinta Diseembar Isniinta oo ka dhacday magaalada Nonsan ee Gobolka South Chungcheong, ayaa shaqaalihii magaaladu ay siisay ardayda dhigata fasalka lixaad ee Noh Min-hyun oo ay ku jiraan caruur miisaankoodu yar yahay, koofiyado, iyo qoryaha buluuga ah ee bastooladaha lagu qurxiyo. Iyaga oo dib u bilaabaya kooxihii rabshadaha watay, carruurtii, oo loo qaybiyay laba koox, ayaa u boodbooday oo ku qoslay jidkoodii Xarunta cusub ee loo yaqaan 'Sunshine Land militariga' ee khibradda leh si loogu ciyaaro khibrad dagaal oo toos ah oo loo yaqaan 'ciyaarta badbaadada.'
Dabka hubka iyo qaylada labiska murugada leh ayaa ka xanaaqay cod-bixiyaasha, iyagoo siinaya ciyaarta codka. Inta badan caruurtu waxay bilaabeen cabsi la'aan, hubin sida loo adeegsado qoryahooda waxayna ka caga jiidayaan inay ka fogaadaan meel ay ka bilaabaan kooxdooda. Markii ciyaartu soconeyso, in yar oo kamid ah ardayda - badiyaa wiilasha - ayaa kusii kicitimay Sunshine Land, iyaga oo baarayay booska udhaxeeya dhismayaasha been abuurka ah iyo gawaarida gawaarida la dhigto, si loo helo oo loo toogto asxaabtooda fasal-isku-celinta-cadaawayaasha-cadawga.
Wadada dhinaceeda laga soo bilaabo Sunshine Land waa Xarunta Tababarka Ciidamada Kuuriya, waana xarunta tababarka militariga ee ugu weyn dalka. 2016, oo ka mid ah ragga dhalinyarada ah ee 220,000 ee ku biiraya ciidankooda waajibka milatariga ee qasabka ah, 82,000 iyaga ka mid ah waxay u yimaadeen Nonsan tababarka aasaasiga ah. In kabadan hal milyan oo kale - waalidiinta, walaalaha, asxaabta, iwm - ayaa booqday iyaga sanadkii lasoo dhaafay.
Udhawaanshaha Sunshine Land xarunta xarunta tababarka ciidanka ma ahan wax shil ah. Sida uu sheegayo Kim Jae-hui, maareeyaha hawl-maalmeedka xarunta khibradda milatariga, duqa Nonsan Hwang Myeong-seon wuxuu arkay fursad laba jibaar ah oo uu ku gali karo suuqa qoysaska qoysaska iyo asxaabta oo ku kala tagaya dariiqooyin, iyo sidii kor loogu qaadi lahaa magaalada. Muuqaalka iyo dhaqaalaha adoo soo jiitay soo booqdayaal millatari oo aad u xiiso badan.
Marka lagu daro setka ciyaarta badbaadada, xaruntu waxay soo bandhigtaa cayaaraha toogashada shaashadda, ciyaar xaqiiq ah oo dalxiis ah, iyo naqshadeyn 1950s ah oo la yiraahdo Studio Sudden Attack Studio. Xilligii gumaysiga ayaa sidoo kale socda. Kadib furitaan jilicsan ee Noofembar, albaabbada Sunshine Land ayaa si rasmi ah u furi doona Maalinta Sannadka Cusub ee 2018.
Si ka duwan barnaamijyada dhaqanka milatariga iyo amniga waxbarashada ee Kuuriyada Koofureed, booqdayaasha loo yaqaan 'Sunshine Land' wax kama maqlaan Kuuriyada Waqooyi ama xumaanta shuuciyada. Sunada loo yaqaan 'Sunshine Land' ayaa soo jiidata booqdayaasha gudaha iyagoo ka duulaya kala duwanaanshaha u dhexeeya dagaalka sidii ciyaar iyo sida dhabta ah. Soo-booqdeyaashu waxay isu arkaan inay ku dhex quusteen adduunyo xiise leh, isla markaana run ah oo durba ka dhigtay inay ku bartaan riwaayadaha, filimada, iyo cayaaraha toogashada qofka-ugu-horeeya.
Sunshine Land iyo xarummo waayo-aragnimo millatari oo la mid ah oo ku soo kordha dalka oo dhan ayaa waxaa inta badan wado dowladaha hoose oo diiradda saaraya soo jiidashada dalxiisayaasha.
Xarumaha khibradaha milatariga, ee u daaweeya dagaalka sidii ciyaar oo kale, waxay halis gelinayaan labadaba qiimeyn iyo caadi u noqoshada xaalad dagaal joogto ah Jasiiradda Kuuriya. Dagaalkii Kuuriyaanka weligood si rasmi ah ugama dhammaan, khilaafka soo socda had iyo goorna wuxuu umuuqdaa inuu kusii kordhayo cirka; dhalinyarada laba ama sadexda jiilka ee laga saaray Dagaalkii Kuuriya waxay baranayaan waxa isku dhacu yahay hab cusub.
“Ardayda maalmahan waxay ciyaaraan ciyaaro kombiyuutar badan,” ayuu yiri macallin fasalka lixaad Noh. Laakiin khibradani waa kuwa aan toos ahayn oo wax xaqiiqda ah kuma dhow yihiin. Ardayda labka ah, maxaa yeelay waa inay mustaqbalka ku biiraan militariga, waxaa ufiican inay u helaan khibrad macquul ah. ”
Lee Seong-jae, oo aabbe u ahaa wiil yar oo Daejeon ah, ayaa yidhi, “Waa wax lagu farxo. Majirto fursado badan oo Korea ay isku dayayso in ay qori toogato. Marka tan la eego, waxaan halkaan u imid sababta oo ah waxaan moodayay inay fikrad fiican tahay inaan la booqdo wiilkayga ugu yaraan hal jeer. ”Wuxuu raaciyay," Si daacadnimo ah, ma jiraan meelo kale oo badan oo lagu booqdo aaggan. "
Marka laga eego aragtida mas'uuliyiinta hoolka shirarka ee Nonsan, ujeedada ugu weyn ee Sunshine Land waa in la abuuro dhaqdhaqaaq dhaqaale. Horumarku wuxuu caddeeyay inay caqabad ku tahay Nonsan iyo magaalooyin kale oo militari, halkaas oo inbadan oo ka mid ah booska loo asteeyey 'aagga fududeynta millatariga.' Sababtoo ah horumarinta warshadaha iyo tas-hiilaadka kale ee waaweyn ee goobahan ayaa xadidan ama waa mamnuuc, hoolka magaalada Nonsan wuxuu go’aansaday inuu ku nuuxnuuxsado dalxiiska sida ay u tahay horumarka deegaanka.
Ardayda ku ciyaareysa ciyaar milatari oo la dhigay. (Sawirka: Bridget Martin ee Kuuriya Soo Bandhig)
Magaaladu waxay dhigtay kala bar lacagta bilyan ee 1.1 ay ku guuleysatay ($ 1 milyan) oo loogu talagalay maalgalinta Sunshine Land, halka Gobolka South Chungcheong iyo Wasaaradda Dhaqanka, Cayaaraha, iyo Dalxiiska ay harsan yihiin inta harsan. 2013, magaaladu waxay uxilsaartay dhul ballaaran oo dhul beereed ah waxayna bilaabatay dhismaha; mid ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ee waayeelka ayaa ii sheegtay inay iyadu baradho baradho macaan isla goobta dhawr sano ka hor (diiwaanka, ka shaqaynta Sunshine Land way fududahay).
Wareysiga oo ku yaal hoolka magaalada, Shin Heon-jun, oo ah sarkaalka rasmiga ah ee Nonsan ee kormeeraya sunnada 'Sun Land', wuxuu sharraxay caqliga horumarka ee shaqada: "Haddii dalxiisayaal badan u soo jiitaan aaggan, maalgashiga khaaska ah ayaa raaci doona: hoy, makhaayado, goobo madadaalo, iyo meelaha wax laga iibsado. ”
Tan iyo markii mashruuca la bilaabay, wariyaha warfaafinta ee SBS wuxuu maalgaliyay 500 milyan oo ku guuleystey riwaayad-xukun gumeysteyaal oo lagu xiray Sunshine Land. Qoraalka shaashadda ee la amaani karo Kim Eun-Sook ayaa u adeegsan doona inuu toogto Mudane sun, riwaayad cusub oo ku saabsan nin reer Kuuriya ah oo ka tagaya Kuuriya, oo ku biiraya milatariga Mareykanka, ka dibna ku noqonaya waddankiisii ​​askar ahaan.
Magaca 'Sunshine Land' waxaa markii hore dhiirigeliyay riwaayadda Kim Eun-Sook, laakiin maamulaha baarkinka Kim Jae-hui, magaca ayaa qaatay macno labaad oo si toos ah ugu xidhan dadaallada horumarinta maxalliga ah. "Sida qoraxda oo kale ugu faafaysa muuqaalkiisa," ayuu ku qayliyay, isaga oo u muuqda inuu dib u akhriyo khadka si fiican loo celiyay, "warka xaragada milatariga ee Nonsan wuxuu ku faafi doonaa waddanka oo dhan."
Kim Jae-hui wuxuu igu hogaamiyay 1950s-style Sudden Attack Studio, iskudhafka ciyaarta badbaadada iyo jilitaanka riwaayadaha ee wadaaga seddex-meelood laba magac magaceedana leh ciyaar kombuyuutar toogasho qof caan ah oo caan ah. Waxay duqeeyeen dhismayaal isku dhafan oo ay ku jiraan dukaamo Mareykan ah iyo baararka Mareykanku saameeyay, iyo furitaanka millatariga Mareykanka ee isweydaarsiga booska ayaa istaagay albaabka dejinta.
Kim Jae-hui iyo Shin Heon-jun uma muuqan inay u arkaan Sunada Dhulku inay yihiin wax aan ka ahayn barta u gaarka ah mawduuca. Jawiga dib-u-abuuray jawiga 1950s ee 'Sudden Attack Studio, Shin wuxuu yiri, waa goob' ayeeyada iyo ayeeyada, waalidiinta, iyo caruurtu ay wada tegi karaan - waa goob ay u jiraan jiilkasta. "Halkii laga noqon lahaa faallo toos ah khibradaha dagaalka dalka, waa "aag khibrad dagaal oo iskujira, soonaha sawirka, iyo goobta filimaanta riwaayadaha."
Sunshine Land waxay qayb ka tahay qoys weyn oo wax ku barta aqoonta milatariga iyo mashaariic waayo-aragnimo u leh dalka oo dhan.
Ilaa dhawaqa isla dhawaaqa dhawaaqa rasaasta iyo rasaasta raga dhibka ku haysa, Ciyaarta badbaadada ee Sunshine Land waxay la mid tahay mid ay ciyaareen kaydiyaasha millatari meel ka duwan. xarunta bariga Seoul ee Namyangju. Kaydiyaasha kaydiyaasha ayaa waliba ka ciyaara shaashad dagaal oo magaalooyin ah oo u eg kuwa ciyaartii kombiyuutarka toogashada ee qofkii ugu horreeyay ku ciyaari lahaa markay dhalinyaro ahaayeen qolalka ciyaaraha PC.
Sida laga soo xigtay Yoonhap News, Xukuumadda magaalada Seoul waxay iskaashi la sameyneysaa Namyangju iyo Ciidanka si loo oggolaado in rayidka loo adeegsado tas-hiilaadkaan tababarka oo qayb ka ah dadaal ballaaran oo lagu bixinayo fursadaha firaaqada iyo madaddaalada loogu talagalay dadka deggan caasimadda.
Awooweyaasha / ayeeyayaasha, waalidiinta, iyo carruurtu way wada tegi karaan - waa meel ay abtirsiintu u baahan tahay.
Iyada oo Mareykanku ku soo celinayo meelihii milatariga 36 ee Kuuriyada Koonfureed iyo isku-darka ciidamada isku dhafka ah ee Pyeongtaek, magaalooyin qaar oo martigeliyay xarumo millatari oo Mareykan ah ayaa u rogay jardiinooyinka milatariga si ay uga faa'ideystaan, una baddalaan, aqoonsigooda millatari ee maxalliga ah iyagoo adeegsanaya kuwii hore ee Mareykanka. dhulal militari iyo kaabayaal.
Sababtoo ah wasaaradda gaashaandhiggu waxay leedahay inta badan dhulka ay soo celiso Mareykanka, magaalooyinku waxay wajahayaan fursado horumarineed oo xaddidan. Waa inay iyagu iibsadaan dhulalka laftooda sicirka suuqa, oo ay dhif u awoodi karaan inay qabtaan, ama ay qabtaan noocyo gaar ah oo ah mashaariic horumarineed, sida jardiinooyinka, si ay xaq ugu yeeshaan kaalmada maaliyadeed ee dowladda dhexe.
Dhawaan, Paju iyo Gobolka Gyeonggi ayaa a heshiis oo ay la socoto wasaaradda gaashaandhigga si loo abuuro khibrad milatari iyo baarkin taariikhi ah ee xeradii hore ee US Grives, oo lagu xiray 2004. Booqdeyaasha xadiiqadda, oo ku yaal waqooyiga wabiga Imjin ee u dhow xadka ay la leeyihiin Kuuriyada Waqooyi, waxay ku seexan karaan qolyaha hore ee saraakiisha, waxay isku dayi karaan labisyada milatariga, waxay sameyn karaan sumad ey eey milatari, oo ay arki karaan meelaha laga duubayo filimka. Faracyadii Qoraxdu, Riwaayad kale oo Kim Eun-Sook.
Dhinaca kale, meesha aan ku noolahay Dongducheon ee waqooyiga Seoul, sarkaal magaalada ka tirsan oo aan magaciisa la shaacin ayaa ii sheegay inuu ku riyoonayo u rogaya Camp Casey, oo ah saldhig millatari oo Mareykan ah, inuu galo goob khibrad milatari oo Mareykan ah markii salka dhulka dib loogu celiyo Kuuriyada Koofureed. Noocyo toogasho iyo siyaasad Ingiriis ah oo keliya ayaa soo jiidan kara dadka soo booqda dibaddeeda; Burger King, Popeyes, iyo Starbucks ee jira, ma sii jiri doonaan, iyadoo aan maqaayadaha makhaayadaha Kuuriya laga ogolaan doonin; iyo qayb ka mid ah booska ayaa si gaar ah loo dejin doonaa, iyada oo xeryaha qolalku noqdaan guryo raaxo leh. Qorsheyaasha magaalada ee Uijeongbu waxay leeyihiin fikrado la mid ah tan US Camp Red Cloud, oo Mareykanku qorsheynayo inuu dib ugu laabto Kuuriyada Koonfureed 2018.
Ballaarinta xarumaha khibradaha millatari ee diiradda lagu saaray dalxiiska ayaa timid daqiiqad iyadoo barnaamijyada dowladda ee dhalinyarada ee ku saabsan waxbarashada amniga ay wajahayaan isbadal baaxad leh oo dhanka hirarka ah Waxaa xusid mudan barnaamijka garabka midig, anti-communist Patrotic Education, oo la bilaabay 2011 iyadoo la adeegsanayo maamulka muxaafidka ah ee Lee Myung-bak. Horraantii Diseembar, maamulka Moon Jae-in - oo ah dowladdii ugu horreysay ee aan muxaafid ahayn muddo ku dhow toban sano - ayaa ku dhawaaqday inay hakineyso booqashooyinka fasallada ay ku tagayaan macallimiintu, isla markaana ay dhimayaan miisaaniyadda barnaamijka Waxbarashada Waddaninimada, oo ay maamusho wasaaradda difaaca.
Sida ay daaha ka rogeen suxufiyiin baarayaal ah, macallimiinta waxbarashada Patriotic Education faafin macluumaad been ah oo ku saabsan nolol maalmeedka Waqooyiga Kuuriya, iyo muujiyey dhaleeceynta Kuuriyada Koonfureed ee ku saabsan siyaasadda amniga gobolka sida basaasida Kuuriyada Waqooyi. Macallimiinta sidoo kale hoos u dhigay ugu yaraan ardayda dugsiga hoose ee 500 fiidiyowga rabshadaha wata ee muujinaya ilmo iska soo ridid ​​qasab ah iyo ilmo dilaa Waqooyiga Kuuriya.
Qolka qalabka ciyaarta ee badbaadada Sunshine Land.
(Sawirka: Bridget Martin ee Kuuriya Soo Bandhig)
In kasta oo ay wasaaradda gaashaandhiggu sheegatay in siidaayad guud loo sii daayay dhibaatada video waxay dhaawaceysaa amniga qaranka, waxaa lagu qasbay inuu sii daayo fiidiyowga horaantii sanadkaan, kadib seddex sano oo sharci ah oo uu la halgamaayay urur diimeedka bidix ee caanka ku ah Dadka Wadajirka u ah Dimuqraadiyadda Kaqeybgalka (PSPD).
Guushan kadib, PSPD iyo ururada kale ee madaniga ah waxay sii wadaan inay cadaadis saaraan dowladda si ay u xirto xeryaha khibradaha milatari ee soo jireenka ah ee ay wasaaraddu maamusho, sida Xerada Ciidamada badda ee dhalinyarada ee Pohang. Xeradan, ardayda dugsiga dhexe iyo sare waxay ku qaadan karaan shan maalmood iyadoo marinno khibrad leh ay helayaan tababar - waxkasta laga soo bilaabo dagaalka kiimikada ilaa farsamooyinka duulaya. Waxay sidoo kale fuuli karaan KAAV, oo ah gaari duug ah u eg gawaarida weerarada xambaarsan. 2013, shan arday ayaa ku hafatay badda dhexdeeda ka dib markii ay ku cadaadisay barayaasha inay ku dabaashaan biyaha xun.
"Barnaamijyada tababarka milatariga ee carruurta ayaa leh saameyn xun iyaga, taas oo kobcisa rabshadaha iyo cadaawadda, sidaa darteed waxaan ku adkaysanaynaa in la baabi'iyo barnaamijyadan," Hwang Soo-dhalinyaro oo ka tirsan PSPD
Moon A-dhalinyaro, oo ah isuduwaha hay'adda waxbarashada nabada ee Peace Momo, oo ka soo horjeesatay barnaamijka waxbarashada Patriotism Education iyo xeryaha milatariga ee dhalinyarada, ayaa sheegtay in ay “aad uga naxday” markii ay ogaatay in Sunshine Land ay maalgaliso aysan aheyn Wasaaradda Difaaca, laakiin ay tahay Wasaaradda Dhaqanka, Ciyaaraha, iyo Dalxiiska.
“Khibradda milatariga ee caruurta waa tusaale murugo leh oo ku saabsan sida bulshada Kuuriyaanka ay u nacay dhaqanka dhaqankooda. Dadka waaweyn waxay leeyihiin waajibaad ah inay ka hortagaan carruurta inay ku tiirsanaadaan khibradaha xanuunka badan ee dagaalka ay soo gaareen jiilalka hore. Yaanan u gudbinin carruurteenna luuqadda kala-goynta iyo burburka, ”Moon wuxuu ku qoray email.
Isla maalintaas ardayda fasalka lixaad waxay soo bandhigeen cayaarahooda qorrax-dhaca ee Sunshine Land, boqolaal dukumiinti ah - oo qaarkood ay ka yaryihiin todobo ama sideed sano oo ka weyn ardayda dugsiga hoose - waxay yimaadeen Nonsan si ay u bilaabaan howlahooda milatariga ee nolosha dhabta ah. Ma jirin boodbood iyo qosol. Askarta yar-yar waa in lagu xoqaa horteeda albaabka xarunta tababarka oo ay wejigiisu yaryahay.
Kahor intaanay u soo gudbin xarunta tababarka markay ahayd 2: 00 pm goos goos goosad, ragga yari waxay cunoodii ugu dambeysay ee banaanka ay cunaan waalidkood, walaalahood, asxaabtooda, saaxiibbadooda, iyo kuwa kale ee ay jecel yihiin.
Markii aan waydiiyey mid ka mid ah ardayda fasalka lixaad ee booqanaya Nonsan's Sunshine Land waxa uu ka bartay intii lagu jiray ciyaarta badbaadada, wuxuu iigu jawaabay, "Run ahaantii qoryaha waa adag tahay in la isticmaalo. Iyo sidoo kale, ma dooneysid inaad dagaal kula gasho qoriga BB.
* Bridget Martin waa musharax PhD ee Juquraafiga ee Jaamacadda California, Berkeley. Cilmi-baaristeeda waxay diiradda saaraysaa xiriirka ka dhexeeya militariga iyo horumarka maxalliga ah ee Kuuriyada Koonfureed.
Carruurta lagu qaado cabirka naxdinta leh ee khilaafaadka adduunka oo dhan, ayay tiri UNICEF
Taxanaha fiidiyowga ee # Intro2Disarmament wuxuu kakooban yahay 5 fiidiyow oo gaagaaban oo sharxaya sida hub ka dhigistu uga qayb qaadato adduun nabdoon, nabdoon oo waara hab fudud oo la fahmi karo. [sii wad akhriska…]
Ku Tirtirida Nukliyeerka
Waxaa laga yaabaa 18, 2018 Warbixinnada Waxqabadka 0
Hoggaamiyeyaasha ardayda ee ka socda Xarunta Ikeda ee seminar-ka 2017-2018 ee ku takhasusay baabi'inta nukliyeerka ayaa weydiinayay noocyada su'aalaha oo labadaba kor u qaadi doona wacyiga arrimaha nukliyeerka ee muwaadiniinta caadiga ah ayna kordhin doonaan dhiirrigelintooda inay wax ka qabtaan himilada ugu dambeysa ee adduunka oo xor ka ah hubka nukliyeerka. 21-kii Abriil, waxay ka warbixiyeen waxqabadkooda Xarunta Ikeda ee wadahadalkii nabadeed ee ugu horreeyay ee ardaygu hoggaamiyo, oo loogu magac daray "Baabi'inta Nukliyeerka: Sheegashada Xaqa Aad u Leedahay In Aad Noolaato." [sii wad akhriska…]
Baarlamaanka Israel ayaa u codeeyay in laga mamnuuco iskuulada iskana mamnuuco dhaleeceynta dowlada iyo ciidamada
July 22, 2018 Warar & Muuqaal 0
Baarlamaanka Israel ayaa meel mariyay sharci ka mamnuucaya kooxaha dhaliila ciidamada ama gobolka inay galaan iskuulada oo ay la hadlaan ardayda. Sharciga ayaa u codeeyay 43 halka uu u codeeyay 24 tallaabo ah in kuwa wax u dhimaya ay yiraahdaan waxay meesha ka saari doontaa hadalka xorta ah ee nidaamka waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Dagaalkii Dunida Adduunka wuxuu leeyahay,
December 31, 2017 at 8: am 05
Ciyaaraha dagaalka ee xishoodka leh ee carruurta.